XOG: Saddex Arrimood Oo Faransiiska Ka Caawiyey Inay Ka Adkaadaan Belgium – Cadalool | Shabakada Wararka Ciyaaraha
HomeWararka MaantaXOG: Saddex Arrimood Oo Faransiiska Ka Caawiyey Inay Ka Adkaadaan Belgium
XOG: Saddex Arrimood Oo Faransiiska Ka Caawiyey Inay Ka Adkaadaan Belgium
Xulka qaranka Faransiiska ayaa rumeeyey riyadii ay sannadihii u dambeeyey ku hamiyayeen ahayd inay finalka Koobka Adduunka tagaan oo ay iska maydhaan ceebtii koobkii qaramada Yurub ee laba sannadood ka hor kasoo gaadhay kulankii finalka oo Portugal ay dalkooda kaga qaaddeen.
Samuel Umtiti ayaa halyeyga badbaadiyey Faransiiska noqday, hase yeeshee ciyaaryahannada kale sida Griezmann, Mbappe, Varane iyo Matuidi ayaa iyaguna sameeyey dedaal iyo halgan u sahlay inay gacanta sare ka yeeshaan ciyaartooyada Belgium oo wakhti horeba soo xushay xiddigaha awoodda badan sida Marouane Fellaini, Dembele iyo goolhaye Coutois oo sameeyey badbaadin badan.
Ka hor ciyaarta, waxa aanu idiin soo gudbinay shan arrimood oo saamayn ku yeelanaya natiijada ciyaarta iyo cidda guuleysanaysa, hase yeeshee waxa aanu halkan idiinku haynaa saddex arrimood oo sabab u noqday France inay guusha qaataa.
Roberto Martinez oo aan helin ciyaartoygii ku habboonaa buuxinta kaalintii Thomas Meunier: Tababaraha xulka qaranka Belgium ayaa ku dawakhay soo xulashada ciyaartoygii beddeli lahaa difaaciisii midig ee Meunier oo ganaax ku seegay kulankan ka hor markii uu kaadh digniin ah qaatay ciyaartii Brazil.
Dad badan waxay rajaynayeen in tababare Roberto Martinez uu ka guuri doono qaabkiisii hore ee difaaca oo uu ku ciyaari doona 3-4-3, hase yeeshee sidaas muu yeelin, waxaanu difaaca midig dhigay laacibka khadka dhexe ee Nacer Chadli oo kari waayey inuu booskaas sidiisii u buuxiyo, halka uu khadka dhexena geeyey Mousa Dembele oo kulamadii hore aan ciyaarin, taasina waxay ka dhigtay khadka dhexe ee Belgium kuwo u muuqda inay seexdeen gaar ahaan qaybtii dambe oo weerarka Faransiisku daad ku noqday.
Pogba iyo Kante ayaa si joogto ah u caawinayey weerarka, halka xiddigaha Belgium uga ciyaarayey dhexdu ay ahaayeen kuwo dawakhsan oo deggenaan la’aan ka muuqato, waxaana ugu sii darnaa Dembele oo bandhig ciyaareed liita loo geliyey diiwaanka.
Maqnaanshaha Meunier waxay keentay in Lucas Hernandez oo difaaca bidix uga ciyaarayay Faransiisku aanu marnaba la kulmin khatar weyn amaba weerar dhinciisa ka yimaadda maadaama oo Chadli uu dib u guranayey. Beddelkii uu ciyaarta kusoo geliyey Dries Mertens wuxuu Belgium geliyey dardar, hase yeeshee wakhtiga oo ku yaraa awgeed iyo difaaca Faransiiska oo adkaa ayaa u saamixi waayey inay la yimaaddaan goolka lagaga horreeyey.
Weerarkii Belgium oo la go’doomiyey: Ciyaaryahannada Eden Hazard, Kevin De Bruyne iyo Romelu Lukaku markay jaanta isla helaan waxay waddan walba oo ay lasoo ciyaareen ka dhigeen ka dhigeen kuwo guul-darraystay. Tababare Didier Deschamps wuxuu in badan sii daraaseeyey qaabka ay ciyaarta u hagaan amaba ugu suurtogasho inay khatar ku noqdaan kooxaha oo ay goolal dhaliyaan. Isaga oo taas ka duulaya ayuu khadka dhexe awoodda saaray, gaar ahaan Pogba iyo Kante oo kala jaray in weerarka Belgium iyo khadkooda dhexe is-gaadhaan, waxaanay ka dhigeen kuwo kala go’doomay oo kubbadaha loo wado ayaa ay si fudud dhexda ugu gelayeen amaba uga qaadanayeen ciyaartoyga wata.
Waxa intaas dheer in ciyaaryahannada Giroud, Griezmann iyo Mbappe ay dhamaantood dib usoo laabanayeen marka kubadda lagala wareego oo ay khadka dhexe caawinayeen si ay u suurtogeliyaan in aanay wada shaqaynin khadka dhexe iyo weerarka Belgium, taasina waxay keentay in Varane iyo Umtiti aanay dhibaato badan kala kulmin weeraryahannada gaar ahaan Lukaku oo aad moodaysay inuu iyaga la shaqaynayo.
Sidaas daraadeed, weerarkii Belgium ayaa noqday go’doon oo khadka dhexe ayaa lagaga adkaaday, taasina waxay faa’iido u noqotay France.
Goolhaye Lloris oo badbaadiyey kubbadihii soo gaadhay: Goolhayaha xulka qaranka France ee Hugo Lloris waxa uu u qalmaa abaalmarinta gacanta dahabka ah, sababtoo ah, dhamaan kulamadii uu soo ciyaaray waxa uu ahaa shabeel kubbaduhu aanay dhayal ku daafin.
Kulankii Belgium waxa uu sameeyey badbaadin dhawr ah oo muhiim ahaa, tusaale ahaan daqiiqaddii 22aad oo difaacyahanka Toby Alderweireld uu kubbad halis ahayd ka diiday inay shabaqiisa tagto.
Goolhayaha oo sidoo kale ah kabtanka xulka France waxa uu sidoo kale ka shaqeeyey oo uu mar walba dib u qaabaynayay difaacyahannada Varane iyo Umtiti oo marka ay yara kala daataan oo u hagayey nin walba booskiisa uu ku saxan yahay.
Saddexdan arrimood ayaa Faransiiska ka caawiyey inay Belgium ka adkaadaan, waxaana ay hadda taagan yihiin marxaladda finalka Koobka Adduunka oo aynu eegi doono khidadda iyo farsamooyinka uu tababare Deschamps la tegi doono ciyaarta ugu dambaysa ee ay koobka ku dagaallami doonaan.